South Africa's ruling party finally turns against Zuma - The Courier
Updated 11:04 pm, Tuesday, February 13, 2018
Secretary General of the African National Congress, (ANC) Ace Magashule, makes a statement at a briefing at the ANC headquarters in downtoan Johannesburg, Tuesday, Feb. 13, 2018. Magashule said the scandal-tainted President Jacob Zuma must leave office. less
Secretary General of the African National Congress, (ANC) Ace Magashule, makes a statement at a briefing at the ANC headquarters in downtoan Johannesburg, Tuesday, Feb. 13, 2018. Magashule said the ... more
FILE -- In this May 6, 2009, file photo, President elect Jacob Zuma reacts after the swearing in of members of Parliament in Cape Town, South Africa. Leaders of South Africa's ruling ANC party are struggling to remove President Zuma from office amid reports he asked for concessions in exchange for his resignation.The African National Congress says it will announce the results of a marathon meeting of its national executive committee at noon on Tuesday Feb. 13, 2018. less
FILE -- In this May 6, 2009, file photo, President elect Jacob Zuma reacts after the swearing in of members of Parliament in Cape Town, South Africa. Leaders of South Africa's ruling ANC party are struggling to ... more
Photo: Nic Bothma, AP
Secretary General of the African National Congress, (ANC) Ace Magashule, makes a statement at a briefing at the ANC headquarters in downtown Johannesburg, Tuesday, Feb. 13, 2018. Magashule said the scandal-tainted President Jacob Zuma must leave office. less
Secretary General of the African National Congress, (ANC) Ace Magashule, makes a statement at a briefing at the ANC headquarters in downtown Johannesburg, Tuesday, Feb. 13, 2018. Magashule said the ... more
Secretary General of the African National Congress, (ANC) Ace Magashule, right, and his deputy, Jesse Duarte, left, at a briefing at the ANC headquarters in downtown Johannesburg, Tuesday, Feb. 13, 2018. Magashule said the scandal-tainted President Jacob Zuma must leave office. less
Secretary General of the African National Congress, (ANC) Ace Magashule, right, and his deputy, Jesse Duarte, left, at a briefing at the ANC headquarters in downtown Johannesburg, Tuesday, Feb. 13, 2018. ... more
FILE - In this Feb. 6, 2018, file photo, South African President Jacob Zuma, left, waves as he leaves parliament in Cape Town, South Africa. Leaders of South Africa's ruling ANC party are struggling to remove Zuma from office amid reports he asked for concessions in exchange for his resignation.The African National Congress says it will announce the results of a marathon meeting of its national executive committee at noon on Tuesday Feb, 13, 2018. less
FILE - In this Feb. 6, 2018, file photo, South African President Jacob Zuma, left, waves as he leaves parliament in Cape Town, South Africa. Leaders of South Africa's ruling ANC party are struggling to remove ... more
FILE - In this Sept. 5, 2016, file photo, an African National Congress (ANC) supporter wears a defaced t-shirt of President Jacob Zuma, calling for his resignation, during a protest outside the party's headquarters in downtown Johannesburg. Leaders of South Africa's ruling ANC party are struggling to remove Zuma from office amid reports he asked for concessions in exchange for his resignation. The ANC says it will announce the results of a marathon meeting of its national executive committee at noon on Tuesday Feb. 13, 2018. less
FILE - In this Sept. 5, 2016, file photo, an African National Congress (ANC) supporter wears a defaced t-shirt of President Jacob Zuma, calling for his resignation, during a protest outside the party's ... more
FILE - In this May 2, 2014, file photo, an election poster of President Jacob Zuma is defaced in the downtown area of Johannesburg, South Africa. Leaders of South Africa's ruling ANC party are struggling to remove President Zuma from office amid reports he asked for concessions in exchange for his resignation.The African National Congress says it will announce the results of a marathon meeting of its national executive committee at noon on Tuesday Feb. 13, 2018. less
FILE - In this May 2, 2014, file photo, an election poster of President Jacob Zuma is defaced in the downtown area of Johannesburg, South Africa. Leaders of South Africa's ruling ANC party are struggling to ... more